နဖူးတဈဝိုကျ တဈဒိတျဒိတျနဲ့ ခေါငျးကိုကျနပွေီလား? | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
နဖူးတဈဝိုကျ တဈဒိတျဒိတျနဲ့ ခေါငျးကိုကျနပွေီလား?
ဟုတျပါတယျ။ နဖူးတဈဝိုကျ ခေါငျးကိုကျခွငျးဟာအဖွဈမြားပွီး မကွာခဏဖွဈပျေါတတျပွီး ဖွဈပျေါစေ သော အကွောငျးရငျးမြားကို သိရှိထားသငျ့ပါတယျ။
အလှနျစူးရှနာကငျြသော ခေါငျးကိုကျခွငျးတဈမြိူးဖွဈပွီး မကျြလုံး၊ နားထငျနဲ့ နဖူးတဈခွမျးတညျးတှငျ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ ခေါငျးကိုကျခွငျးနဲ့အတူ နှာခေါငျးမှ အရညျမြားထှကျခွငျး၊ မကျြရညျကခြွငျး၊ သူငယျအိမျကြုံ့ခွငျးနဲ့ မကျြနှာယောငျခွငျးတို့ပါ တှဲဖကျဖွဈပျေါတတျပါတယျ။
Cluster headache ဖွဈပျေါသူမြားဟာ အလှနျနာကငျြခွငျးနဲ့အတူ စိတျတိုခွငျး၊ လှဲအိပျလို့မရခွငျးတို့ပါ တှဲဖကျဖွဈပျေါတတျကွောငျး သတိခပျြသငျ့ပါတယျ။
နဖူးတဈဝိုကျတှငျ နာကငျြသော ခေါငျးကိုကျခွငျးမြိုးဖွဈပွီး နှာခေါငျးတဈဝိုကျရှိ sinus မြား ပိုးဝငျခွငျး ကွောငျ့ ဖွဈပျေါတတျပါတယျ။ Sinus infection လက်ခဏာမြားအနနေဲ့ ခမျြးတုနျဖြားခွငျး၊ နှာခေါငျးမှ အရညျပဈြပဈြမြား ထှကျခွငျးတို့ ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။
နဖူးသာမက နားထငျ၊ မကျြစိနဲ့ ခေါငျးအနောကျဖကျမြားတှငျပါ နာကငျြတတျပွီး တဈနတေ့ာလုံး မရပျ မနား ကိုကျခဲနတေတျပါတယျ။
နဖူးတဈဝိုကျ နာကငျြကိုကျခဲခွငျးဟာ အဖွဈမြားပွီး ဖွဈပျေါစသေောအကွောငျးရငျးကို သိခွငျးဖွငျ့ ကု သတဲ့နရောမှာ လှယျကူစပေါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုမြားခွငျး၊ အရကျနဲ့ဆေးလိပျ အလှနျအကြှံသောကျသုံး ခွငျးမြားကို ဆငျခွငျသငျ့ပွီး အိပျရေး၀၀အိပျခွငျးနဲ့ အာဟာရပွညျ့ဝအောငျ စားသုံးခွငျးတို့ကို ပွုလုပျ ပေးသငျ့ပါတယျ။
ဟုတ်ပါတယ်။ နဖူးတစ်ဝိုက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာအဖြစ်များပြီး မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်စေ သော အကြောင်းရင်းများကို သိရှိထားသင့်ပါတယ်။
အလွန်စူးရှနာကျင်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်းတစ်မျိူးဖြစ်ပြီး မျက်လုံး၊ နားထင်နဲ့ နဖူးတစ်ခြမ်းတည်းတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့အတူ နှာခေါင်းမှ အရည်များထွက်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျုံ့ခြင်းနဲ့ မျက်နှာယောင်ခြင်းတို့ပါ တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
Cluster headache ဖြစ်ပေါ်သူများဟာ အလွန်နာကျင်ခြင်းနဲ့အတူ စိတ်တိုခြင်း၊ လှဲအိပ်လို့မရခြင်းတို့ပါ တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြောင်း သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
နဖူးတစ်ဝိုက်တွင် နာကျင်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး နှာခေါင်းတစ်ဝိုက်ရှိ sinus များ ပိုးဝင်ခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ Sinus infection လက္ခဏာများအနေနဲ့ ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊ နှာခေါင်းမှ အရည်ပျစ်ပျစ်များ ထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
နဖူးသာမက နားထင်၊ မျက်စိနဲ့ ခေါင်းအနောက်ဖက်များတွင်ပါ နာကျင်တတ်ပြီး တစ်နေ့တာလုံး မရပ် မနား ကိုက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။
နဖူးတစ်ဝိုက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဟာ အဖြစ်များပြီး ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းကို သိခြင်းဖြင့် ကု သတဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ အရက်နဲ့ဆေးလိပ် အလွန်အကျွံသောက်သုံး ခြင်းများကို ဆင်ခြင်သင့်ပြီး အိပ်ရေး၀၀အိပ်ခြင်းနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသုံးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ် ပေးသင့်ပါတယ်။